Sidee baan u saari karaa alaabtayda on Amazon iyada oo gargaarka SEO ah?
Amazon waa badeecada ugu weyn ee ganacsiga halkaasoo maalin walba malaayiin dad ah oo ka kala yimid adduunka oo idil ama iibsanaya wax. Ganacsatada internetka ee ku guuleysta waxay helayaan lacago badan oo lacag ah xitaa aan abuurin website. Waa habka ugu haboon uguna wax ku oolka ah ee alaabada tafaariiqda leh online-ka ah maalgashi lacageed oo yar. Heerka tartanka waa mid aad u sarreeya. Amazon waxaa ka buuxa dad badan oo doonaya inay kor u qaadaan dakhligooda - soybean shrinkage. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad ka fiican tahay tartamayaashaada dhinacyada oo dhan iyo hirgelinta Amazon wax soo saarka SEO. Isbedelka boggaaga ganacsigaaga Amazon waa istaraatejiyad ujeeddo leh oo saameyn toos ah ku yeelan karta sheygaaga raadinta bini'aadamka. Si kastaba ha ahaatee, qaabka ugu adag ee Amazon optimization habka waa istaraatejinta soo gudbinta alaabta wax soo saarka. Ganacsiyo badan oo internetka ah ayaa la kulma dhibaatooyinka iyaga oo la qabsoomay xisaabtooda xisaabtanka Amazon oo loo yaqaan 'A9'. Amazon kama furo qarsoodi ah darajada algorithm, taas oo ka dhigaysa mid aad u adag in la helo TOP iyada oo la fulinayo istaraatijiyadaha istimaalidda. Khabiiro badan ayaa wali isku dayaya inay ogaadaan waxa saameeya saameyn ku yeelan karaan Amazon SERP iyo sida loo saameeyo arrimahaas. In this article, waxaan idinla wadaagi doonaa qaar ka mid ah Amazon wax soo saarka soo jeedinta SEO kuwaas oo kaa caawin kara inaad u sareeya on sare on this ganacsiga.
Amazon wax soo saarka soo jeedinta SEO
Ka hor inta aan bilaabin inaan ka hadalno siyaabaha sida loo hagaajiyo bogga Amazon SEO, waxaan u baahanahay inaan barto waxa gudaha iyo qodobada dibedda ayaa saameyn ku leh liiska heerarka Amazon.
Arrimaha tooska ah ee saamaynta algorithm ee Amazon waa qoraalka muhiimka ah (titles, sifooyinka, sharaxaadda wax soo saarka), helitaanka (taariikhda la duubay), xawaaraha iyo xawaaraha iibka.
Cunsurrada aan tooska ahayn ee xilligooda waxaa ka mid ah habka soo-kabashada, dib u eegista (tirada guud ee dib-u-eegista, tirada dib-u-eegista wanaagsan iyo dhibcaha dib u eegista), A + content, images, advertising iyo promotions.
Hadda, marka aynu ogaanno waxa saameeyaha saameyn ku yeelan karo qiimaynta Amazon organic, waa wakhti ay ka hadlaan farsamooyinka naqshadaynta kaas oo samayn doona boggaaga ganacsiga muuqaalka Amazon.
Waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso alaabooyinkaaga helitaanka si aad u sameysid wax soo saarkaaga
soo bandhigida muuqaalka on Amazon. Amazon waa nidaam daryeesho badan oo ku saabsan iibsadaha ka badan iibiyeyaasha, diiradda saaraya SERP natiijooyinka halkii ay ka iibin lahaayeen alaabooyinkaas. Laga soo bilaabo qaybteeda, iibiye ayaa dhiirigeliya inuu kordhiyo tirada guud ee kulamada ee boggiisa badeecada si uu u helo jagooyin wanaagsan oo ku saabsan Amazon SERP iyo kor u qaadista dakhliga. Nidaamka Amazon optimization ee ka mid ah afar heer oo muhiim ah - hagaajinta alaabada wax soo saarka, kordhinta taraafikada, kordhinta iibka, bogga Amazon ee kor u qaadaya SERP. Waxaad saameyn kartaa boggaaga badeecada ee helitaanka suuqgeynta iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka soo socda. First of all, waxaad u baahan tahay inaad abuurto content ku haboon oo si fiican u-optimized for your page badeecada. Waxaa intaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro taariikhda waxqabadka iibka, dib u eegista wax soo saarka, tirada saamiyada iyo sicirka dhulka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in lahaanshaha Amazon content la wadaagi karo. Taasi waa sababta aadan u lahayn dammaanad ah in mawduucaaga ka muuqan doono bogga faahfaahinta Amazon. Waxaad wanaajin kartaa xaaladdan inaad noqoto qayb ka mid ah Diiwaanka Amazon Brand. Nidaamkani wuxuu bixiyaa ganacsatada internetka ee iibiya alaabada calaamadeysan si ay u yeeshaan awood sare SERP.